အဘယ်ကြောင့်ဟော်မုန်းနွေဦးအတွက်ကစားသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ရှည်လျားသော hibernation ပြီးနောက်, သဘာဝတရား၏မြေတပြင်လုံးနောက်ဆုံးတော့အသက်, အပွင့်အရွက်, ပန်းပွင့်, ဘူးသီးမှကြွလာတော်မူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပူနွေးအပြင်ဘက်ရရှိသွားတဲ့။ အားလုံးသဘာဝသစ်တစ်ခုအသက်တာ၏အစအဦးနိမိတျပုံရသည်။ သင်ကလူတစ်ဦးရေတွင်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားသောအလိုဆန္ဒများ, ရှိပါတယ်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြားတွင်, ရင်ခုန်စရာအသစ်သောအရာတစ်ခုခု, ချင်ပါတယ်။
လူသား, သူတစ်ဦးပန်းပွင့်, စက်ရုံကဲ့သို့ဖြစ်၏, ဆောင်းတွင်း hibernation ထဲသို့ကျပုံ, နေ၏ပထမဦးဆုံးရောင်ခြည်နှင့်အတူတက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ကြီးထွားဖို့အစပြုထားသည်။ ကလူချမ်းအအေးမှထမွောကျစတင်လျှင်အဖြစ်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အဖြစ်မကြာမီမိုဃ်းပွင့်အရည်ပျော်အဖြစ်နေရောင်၏ပထမဦးဆုံးရောင်ခြည်နှင့်တကွ, ပန်းပွင့်, နွေဦးစိတ်ဓါတ်များလူသားတွေအတွက်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, နွေဦးနေ့ကကြီးထွားဖို့အစပြု, ပထမဦးဆုံးတင်ဒါရှိပါတယ်, မွှေးပန်းပွင့်သောအပင်တို့ပွင်ခြင်းနှင့်နေရဲ့ရောင်ခြည်ကြောင့်လူ့ဟော်မုန်းနွေဦးကိုခံစားဖို့လူ့ခန္ဓာကိုယ် play စေသည်အားလုံးရဲ့စိတျနှလုံးနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခြော့မှစတင်။
လူ့နွေဦးဟော်မုန်းဖွံ့ဖြိုးခံရဖို့စတင်နေကြသည်, မေတ္တာလည်းမရှိ, ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများထက်ပိုရငျးနှီး esch ချစ်ခင်နှင့်ချစ်ခြင်းချင်မှနူးညံ့သိမ်မွေ့ကောင်းသောခံစားမှုရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စပြင်ပနေရောင်သို့မဟုတ်လောင်းနွေဦးမိုးရွာရွာရှိပါတယ်, ဟော်မုန်းငြိမ်းချမ်းစွာ play သို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်းကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုချစ်နှင့်နေ့တိုင်းပျော်မွေ့ရမယ်, ယခုနွေဦးရာသီလမ်းမှာအရေးပါသို့မဟုတ်အအေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလမထားဘူး။ ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်အပြုသဘောဆောင်သောခံစားချက်နှင့်ပိုပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုအလိုရှိ၏။
နွေဦးရာသီကိုယျခန်ဓာကိုနှိုးဆော်တော်မူ၏။ တဦးတည်းအားလုံးအိမ်ထောင်ဖက်ရှာနေသည့် Bloom, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်န်းကျင်, ငှက်များမိတ်လိုက်ဘို့အမိတ်ဖက်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကွာဒီယေဘုယျ Euphoria ပီတိကနေမနေနိုင်သည်ကိုမြင်သည်။ သူလည်းသူကလအောကျဖြည့်ဆည်းဖို့ပေါက်ပါဘူးသောအခါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မေတ္တာသည်ရှာနေပါသလဲ? ငါလေထဲတွင် pheromones, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟော်မုန်းတက်နင်းဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။
Posted in, လူကြီးများအတွက်ခေါင်းစဉ်များ
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,227 စက္ကန့်ကျော် Generate ။